Etu esi hazie Email iji weghachite onye Ahịa | Martech Zone
Tuesday, July 14, 2009 Fraịdee, June 24, 2016 Douglas Karr
Imirikiti ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na-eto eto, na-eto, na-echekwa atụmatụ. Nweta ndị ahịa, bulie ndị ahịa ma debe ndị ahịa. Mgbe ịga a Nzukọ Webtrends, Amụtakwara m na iweghachite ndị ahịa mbụ bụ atụmatụ dị ukwuu.
Kemgbe m gara ogbako ahụ, anọ m na-ele anya maka imeghachi azụ ma ọ bụ mkpọsa mgbake. Na nso nso a, m gburu m Ingogba bọọlụ ikuku na akaụntụ. Ọrụ ahụ rụrụ ọrụ zuru oke ma nwee ngwa iPhone pụtara ìhè nke jikọtara ọdụ ụgbọ elu ọ bụla na-esonye na ihuenyo. Emeghị m emechi akaụntụ ahụ maka ọrụ… Anọ m nso n'okporo ụzọ n'ihi ya achọghị m ya ọzọ.
Na anata email, enwere m mmasị site na njirimara, nhazi na impeccable design. Ejiri nlezianya dozie atụmatụ ọ bụla nke email ahụ ma gbuo ya nke ọma:
Brand - a na-agbanye email ahụ nke ọma ka ọ ghara inwe ọgba aghara banyere onye zitere ya.
Message - enwere oku siri ike nke bụ nyocha nke email ka ị ghara ịgụkwu ma ọ bụrụ na ịchọghị.
enye - enwere ọkwa nke a onyinye pụrụ iche, na-eme ka ndị na-agụ ha chọọ ịmata ihe mere ha ji na-egwu ala.
uru - tupu ikwuputa onyinye ahụ, Boingo dị irè na mbụ ịgwa gị ihe mere ka ọrụ ha ka mma! Ha na-agbaso ozi email ahụ niile na PPS na-atụba di na nwunye atụmatụ ndị ọzọ.
Nye nkọwa - ike nkwuwa okwu na oyiri nke ozi bụ n'ezie na-enye nkọwa.
Njikwa - onye isi na onye isi ụlọ ọrụ bịanyere aka na ozi ahụ. Nke a na-ezigara ndị ahịa na ọ dị mkpa ka ha bụrụ… ozi ahụ ziri ezi site n'elu! (N’ezie, achọpụtara m na ọ bụghị the mana ọ dị ezigbo mkpa.
Survey - ezughị? Boingo ama ekere aban̄a mmọ tutu ọdọn̄ mmọ ndidiọn̄ọ ntak. Ọ bụrụ na ị naghị erite uru na onyinye ahụ, ha ga-achọ ịnụ ihe kpatara ya. Nyocha ahụ ha mere dị mkpụmkpụ, dị ụtọ na ruo n'ókè.
N’uche nke m, nke a bụ mkpọsa emeziri nke ọma ma gbuo. O mere ka m megharịa akaụntụ m? Ọ bụghị n'oge a - ebe ọ bụ na anaghị m enwe ike iji ọrụ ahụ. Obi dị m ụtọ, nke ahụ bụ otu n'ime nhọrọ dị na nyocha ahụ na-ajụ ihe kpatara na agaghị m emegharị. M ga-emegharị ọrụ Boingo m ọzọ mgbe m laghachiri n'okporo ụzọ ọzọ? Kpamkpam!
Tags: onyinyeemail mkpọsaesi chepụta mmeri emailmerie n’aghamerie mkpọsa
Eji Social Media Eme Ọ bụghị Ọkachamara
Jul 15, 2009 na 6: 25 AM
Nke ahụ bụ email dị mma!
M na-emekarị ga-esi n'ezie crappy ozi ịntanetị. Ma m Blog banyere ha! M na-etinye njikọ na ụdị weebụ maka nkọwa a ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe mkpofu ahụ m na-enweta.
Jul 16, 2009 na 2:08 PM
Ndụmọdụ dị ukwuu maka onye ọ bụla na-atụle iji email dịka ụzọ iji gbasaa akara ha
Jul 17, 2009 na 10: 05 AM
Ahuru m otu nsogbu ebe a. Ọtụtụ ndị ọrụ azụmaahịa nwere ihe oyiyi egbochi na Outlook ha. Eg mgbe m nwetara promo-email, imewe bụ ihe ikpeazụ m hụrụ ebe ahụ. M na-ahụkarị ọtụtụ igbe ederede aghara aghara na-eme ka email ghara ịgụ. Mgbe anyị mepụtara mkpọsa email na-agbaso, anyị na-anwa ịme ihe dị mfe, nke onwe na mkpụmkpụ, anyị na-enwetakwa nzaghachi ndị ahịa.
Jul 17, 2009 na 12:34 PM
Ozi ịntanetị HTML ka na-arị elu. Mgbe m rụrụ ọrụ na ExactTarget afọ ole na ole gara aga - ozi ịntanetị HTML fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, ma ọnụ ọgụgụ kachasị ọhụrụ m gụrụ bụ nkuchi 85% +. Ọzọkwa, ngwaọrụ mkpanaka na-eme nsụgharị HTML ka mma (ma na-eto eto). iPhone na Crackberry na-edozi ozi ịntanetị HTML n'ụzọ dị egwu.
Ekwenyere m na nloghachi na email HTML karịrị nnọọ nsụgharị ahụ.